Waxaan heegan u jawaabay baahida macaamiisha 'kasta iyo meel kasta, waxaad mar walba nagala soo xidhiidhi kartaa at laguugu sahlo by phone, Email, Skype ama wax kasta oo kale.
injineerada khabiir farsamo Our jeclaan lahaa in aad bixiso adeegga sida ugu dhaqsaha badan. Si kastaba ha ahaatee, si loo siiyo adeeg iyo aad u hesho mushkiladii loo xaliyo, fadlan nala dir email si ay sheegayaan info printer ee buuxa ee Xog saxan, sawirada, iyo baadi.
Shenzhen Lanlin Printech Co., Ltd 's goobaha tababarka ee ku yaalaan Shiinaha, iyo bixiyaan helitaanka dhammaan madbacadaha. Ardaydu waa inay awoodaan inay helaan gacan-ku-aragnimo la daabacay, waxbarashada aasaasiga ah iyo dayactirka hawlgalka jawi gacanta.
Haddii aad awoodo si aad noogu caawiso helitaanka fiisada iyo sidoo kale jeclaan lahaa inuu qaado kharashka ku lugta leh sida tigidhada duulimaadka, fududeynta degaanka, iwm, waxaannu farsamo si ay xafiiska soo diri kartaa, iyo inuu ku siiyo rakibo si xor ah oo tababar ugu dheer sida aad ogtahay sida loo shaqeeyaan.
Haddii aadan weli ku qanacsaneyn adeegyada ay bixiso distributors maxalliga ah, fadlan nala soo xiriir.